Dharka dhaqameed ee Ruushka | Wararka Safarka
Mariela Carril | 22/07/2021 17:00 | dhaqanka, la fahmay
Adduunyada oo dhaqanku u muuqdo inuu sii kordhayo adduunka, dhaqan dhaqameed wadan kasta waxay iska caabiyaan sida quluubta shucuubta. Markay magaaladaasi qabsato dhul ballaadhin ballaadhan, dhaqankeeda waxay u egtahay inay taajir tahay, ku kala duwan tahay, ku kala duwanaan karto. Waa kiiska Ruushka
Maanta waxaan ka hadli doonaa Dharka dhaqameed ee Ruushka. Suud midab leh, oo leh qurxinno aad u wanaagsan oo had iyo jeerna lagu sameeyo. Sida dhaxalka awoowayaasha, dharkaan ayaa sii wadaya inuu ka muuqdo kaniisadaha, tiyaatarada, istuudiyaha qoob ka ciyaarka, ciidaha.
Dharka dhaqameed ee Ruushka bilaabay inuu u horumaro sida oo kale, iyada oo la cayimay, laga soo bilaabo qarnigii XNUMXaad. Si dhab ah looma oga goorta laakiin waxaa lagu qiyaasay inay ahayd taariikhdaas ama qarni ka hor.
Ilaa bilowgii qarnigii XNUMX-aad, beeraley iyo boyars (dadka sharafta leh), waxay xirteen dhar dhaqameed, laakiin 1700 Tsar Peter the Great wuxuu bilaabay inuu soo bandhigo isbadalada qaar isaga oo is xiraya dharka reer galbeedka. Pedro wuu jeclaa Yurub, wuu la dhacsanaa, sidaa darteed wuxuu bilaabay inuu mamnuuco isticmaalka dharka dhaqameed, ugu yaraan magaalooyinka Ruushka.
Kadib waxay ku xirneyd dadka reer ruushka ah inay ilaashadaan oo ilaaliyaan hodannimada iyo quruxda dharka dhaqameed ee Ruushka. Qaar ka mid ah qaybaha dhaqanka maanta looma adeegsan, laakiin kuwa kale waxay ku guuleysteen inay ka badbaadaan waqtiga, ugu dambeyntiina waxay noqdeen halyeeyo.
Laakiin ma waxaa jira in ka badan hal dhar dhaqameed Ruush ah? Dabcan. Mabda 'ahaan, waxaan ka hadli karnaa laba, sarafan iyo poneva. Sarafanku waa sida un jumper dabacsan oo dheer ku xirnaa shaati linen dheer ah oo suun lagu xiray. Suunkaani waa mid soo jireen ah oo waxaa lagu xiraa hoosta sarafan. Dharkaan ayaa la sheegay markii ugu horreysay intii lagu jiray qarnigii afar iyo tobnaad oo ay xirnaayeen ragga oo keliya, qarnigii toddobaad iyo tobnaad oo keliya ayaa u muuqda dhar dumar.
Sarafan lagu sameeyey linen caadi ah ama suuf daabacan oo jaban kaas oo si tiro leh looga soo saaray warshado ku yaal Moscow iyo gobollada Ivanovo iyo Vladimir. Dharkaan dheer, midabada leh ee garbaha furan waxaa lagu xirtay dhar fudud oo la yiraahdo rubakha.
Haddii sarafan looga baahnaa munaasabad gaar ah, markaa waxaad ku dari kartaa xariir iyo maraqyo ama lagu xardhay dahab iyo qalin. Adeegsiga sarafan wuxuu ku faafay dhammaan gobollada woqooyi ee Boqortooyadii Ruushka ee markaa jirtay, ilaa Novgorod, Pskov, Vologda iyo Arkhangelsk.
Hadda, la poneva waa nooc ka mid ah goonnada badanaa laga isticmaalo gobolada koonfurta Moscow sida Voronezh, Tambov iyo Tula. Runtii waa ka weyn sarafan. Poneva waa goonno cad ama jajab ah oo lagu xidho xadhig ama miskaha lagu duubo, oo lagu xidho shaadh dabacsan oo gacmo gacmeed lagu xardhay iyo macawis si qurux badan loogu sharraxay qaansooyin iyo qurxiyo midabbo leh.
Dhinaca kale waxaan leenahay rubakha, shaati u dulqaado taas oo la mid ah cunsurka aasaasiga ah ee dharka Ruushka. Waxaa isticmaalay qof walba, rag, dumar, maal qabeen iyo faqiir. Dharka ayaa markaa noqon kara mid fiican ama jaban, xariir ama cudbi. Waxay ahayd dhar aad u raaxo badan oo ku dhowaad waxba isma beddelin illaa qarnigii labaatanaad.
Kokoshnik wuxuu ahaa dhar dumar oo madaxa qurxiya. Waxay ahayd wax iska caadi ah dumarka inay xirtaan waxyaabaha madaxa iyo timaha la isku qurxiyo, iyadoo kuxiran xaalada bulshada waxaa loo ogolaaday inay soo bandhigaan waxyaabahaas la isku qurxiyo. Haweenka guursaday waxay ku khasbanaayeen inay gabi ahaanba ku daboolaan dharkan, laakiin dumarka kelida ah waxay ku qurxin karaan ubaxyo iyo waxyaabo kale. Cunsurkan waxaa lagu sameyn jiray waxyaabo qaali ah sanadkii oo kaliya ayuu soo muuqan jiray.
Nolol maalmeedka kaliya koofiyadaha ama shaar xiran oo la yiraahdo povoyniki ayaa loo adeegsaday. Dharka dhogorta waxaa loo yaqaan shuba wuuna badbaaday qarniyo, isagoo caan ka ahaa waddanka oo dhan. Waxaa isticmaali jiray rag iyo dumarba, maxaa yeelay xusuusnow in Ruushku leeyahay jawi baraf ah. Maqaarka ayaa loo isticmaali jiray dhinaca hoose ee dharka halka banaanka ay jireen qurxin kale. Maanta jaakadu way fududahay laakiin waxay leedahay ujeedo isku mid ah: diirimaad.
Ereyga caftan Waxaa si fiican loo yaqaan maxaa yeelay waa eray ka imanaya Bariga Dhexe. Si kastaba ha noqotee, waxay si qoto dheer u dhex gashay Ruushka waxayna ku dhowdahay qayb ka mid ah dharka caadiga ah. Waa jaakad, oo aad ugu eg shaati kasta oo casri ah, laakiin waa kaas lagu sameeyay dhar qaali ah oo lagu qurxiyay shaashad. Maaddaama Ruushku yahay waddan ballaadhan, dharka ayaa kala duwan oo qurxinta ayaa sidoo kale ah. Mararka qaarkood waxay xardheen luul, koonfurta waxaa ku yaal badhanno ama qurxinta dhogorta leh.
Hadda, Laga soo bilaabo qarnigii afar iyo tobnaad illaa siddeed iyo tobnaad waxaa jira xoogaa isbeddelo ah dharka dhaqameed ee Ruushka sababtoo ah xiriirka dhow ee u dhexeeya Ruushka iyo Yurub. Aynu u malayno in wakhtigaas Talyaaniga ama Faransiisku dhoofsan jireen dhogor, xariir iyo jilif iyo dharka la qurxiyey oo bilaabay inay muhiimad yeeshaan. Tusaale ahaan, waqtigii Ivan ee Ba'an kuwii soo galay Kremlin-ka waa inay xiraan dhar dhaqameed si ay u ixtiraamaan carshiga ama qarnigii Todobaad iyo tobnaad "kuwa galbeedka" badan, dharka iyo timaha, ayaa la ciqaabay.
Sidaa darteed, marka laga reebo daqiiqado iyo waxyaabo ka reeban Moodhadhka reer Galbeedku waxay ku adkaatay inuu dhex galo Ruushka. Sidaan horay u sheegnay, kadib Peter kii weynaa ayaa yimid wax walbana waa isbadaleen gacanta gacan-hayaha dib-u-habeynta ah ee canshuuraha. Qoyska boqortooyadu waxay qaadeen tillaabadii ugu horreysay ee isbeddelka moodada, labbiska Qaabka yurub, badan oo faransiis ah oo laaban, oo leh koorsooyin iyo madax-madaxeedyo sare oo haweenku bilaabeen inay xidhaan.
Sida iska cad, dadka hodanka ah oo kaliya ayaa awoodi kara isbeddelada noocaas ah ee moodada, sidaa darteed isla markiiba waxaa jiray xariiqa kala qaybinta ee u dhexeeya kuwa awoodda dhaqaale leh oo ku soo xirtay booqashada reer Yurub iyo kuwa aan haysan oo ay tahay inay la joogaan dhar dhaqameed. Magaalooyinka, Moosko ama St.Petersburg aad bay uga sii muuqatay.
Qarnigii XNUMXaad iyo XX qaabka rococo wuxuu noqday mid caan ah, laakiin qarniga cusub moodada ayaa la fududeeyay ka dibna dharka ugu raaxada badan ee Ruushka sida sarafanska la jecel yahay ayaa ku soo laabtay giraanta. Midowgii Soofiyeeti qaabkii ayaa loo fududeeyay xitaa intaa ka sii badan, laakiin si uun xafladaha loogu soo xirto dharka caadiga ah ee Ruushka ama dharka lagu maamulo in la ilaaliyo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » General » dhaqanka » Dharka dhaqameed ee Ruushka